Plan miaraka amin'ny ankizy any Madrid | Vaovao momba ny dia
Isabel Catalan | | Ocio, Nandehandeha niaraka tamin'ny ankizy
Ireo izay handany andro vitsivitsy miaraka amin'ny fianakaviana any Madrid dia azo antoka fa te-hanao drafitra miaraka amin'ireo ankizy, satria mamela azy ireo hahafantatra lafiny hafa ao an-tanàna izy ireo ary avelao ilay zaza entintsika rehetra mivoaka mba hiala voly vetivety.
I Madrid dia tanàna lehibe sy maro karazana ka misy drafitra be dia be hatao foana. Ireto misy drafitra 6 miaraka amin'ny ankizy any Madrid izay azo tanterahina amin'ny maha-fianakaviana mandritra ny taona. Ankafizo izy ireo!
1 Museum an'ny Mouse Perez
2 Ski an-tendrombohitra
3 Patinazy ambony gilasy
4 Valan-javaboary fialamboly
6 Eo anelanelan'ny biby
Museum an'ny Mouse Perez
Ny angano ny Fairy nify dia nilaza fa ity mpikarakara sakaiza namana ity dia manana ny iraka hanangonana ny nifon'ny rononon-jaza rehetra rehefa latsaka izy ireo ary ho valiny dia mamela farantsakely eo ambanin'ny ondana izy.
Ny Ratoncito Pérez dia niandoha tao amin'ny eritreritry ny mpivavaka Luis Coloma izay namorona tantara tamin'ny totozy ho mpiorina mba hampitony ny alahelon'ny Mpanjaka Alfonso XIII tamin'ny fahazazany taorian'ny fahaverezan'ny iray tamin'ireo nifinono.
Araka ny tantara, ny totozy dia nipetraka tao amin'ny tranobe iray amin'ny Arenal Street any Madrid, akaikin'i Puerta del Sol ary tena akaiky ny Palacio de Oriente. Amin'izao fotoana izao, amin'ny rihana voalohany amin'ny laharana faha-8 amin'ity arabe ity, no misy ny House-Museum of the Ratoncito Pérez, izay azo tsidihina isan'andro afa-tsy ny alahady. Ny fidirana mankao amin'ny House-Museum dia 3 euro.
Ny hatsiaka dia fotoana mety hampihetsi-po amin'ny fanatanjahan-tena amin'ny ririnina, iray amin'ireo drafitra miaraka amin'ny ankizy any Madrid izay tena tian'izy ireo satria manambatra ny fahafinaretana amin'ny andro any ivelany, izay manaitaitra azy ireo foana.
Ny Community of Madrid dia manana iray amin'ireo toeram-pilalaovana ski voalohany nisokatra teto amin'ny firenena tamin'ny taona 40. Io no Puerto de Navacerrada malaza any Cercedilla, ao amin'ny Sierra de Guadarrama ary tsy lavitra ny afovoan-tanàna miaraka amin'ny gara Valdesquí, ary eo amin'ilay tandavan-tendrombohitra ihany.
Patinazy ambony gilasy
Ny fitsangantsanganana amin'ny ranomandry milalao hahitana hoe iza no haingana indrindra dia iray amin'ireo drafitra ankafizin'ny ankizy, indrindra ankehitriny rehefa manomboka milatsaka ny mari-pana. Mandritra ny vanim-potoanan'ny Noely dia mameno ranomandry kely ny tanàna hankafizany ny fialantsasatra fa mandra-pahatongan'izany dia afaka mankany amin'ny Palacio de Hielo Dreams (Calle de Silvano, 77), iray amin'ireo malaza indrindra ao Madrid.
Ity esin-dranomandry ity dia miorina amin'ny foibe fiantsenana goavambe ary misokatra mandavantaona ho an'ny skating, hockey na fianarana lesona skating. Izy io dia manana refy 1800 m2 ary ny fidirana dia manana vidiny 7 ka hatramin'ny 12,50 euro miankina amin'ny ora na raha te-hanofa ny skate isika. Raha te hiditra amin'ny gilasy dia mila manao fonon-tànana.
Iray amin'ireo drafitra mahatsikaiky indrindra miaraka amin'ny ankizy any Madrid ny fitsidihana ireo kilasika toa an'i Parque Warner na i Parque de Amusement, izay manolotra karazana hetsika rehetra hialana voly. Mandritra ny taona dia mazàna izy ireo dia mitazona hetsika misy lohahevitra mifandraika amin'ny Halloween na Krismasy ka ny fitsidihana azy ireo amin'ny fotoana toy izao dia fotoana tsy manam-paharoa hahafantarana ireo voly fialamboly ireo amin'ny fomba hafa.
Ny fidirana ao amin'ny Parque Warner dia azo vidiana ao amin'ny biraon'ny boaty 39,90 euro ary ny vidiny dia mety miovaova arakaraka ny andro sy ny fahaizany manome antoka ny serivisy tsara indrindra. Ao amin'ny Amusement Park, ny tapakila ao amin'ny biraon'ny boaty dia mitentina € 32,90 ho an'ny olon-dehibe ary € 25,90 ho an'ny ankizy, raha 19,40 € kosa ny mpisotro ronono.
Nihira i Andy Williams taloha fa ny Krismasy no fotoana nahafinaritra indrindra tamin'ny taona ary marina ny azy. Ao Madrid dia feno hazo cemara manjelatra ny arabe ary manome loko sy atmosfera manokana azy ny jiro. Tian'ireo ankizy ny mandeha an-dalambe mitsidika ny tsenan'i Krismasy ary miakatra amin'ny Naviluz, ilay fiara fitateram-bahoaka Krismasy mandehandeha manerana ny tanàna handinihana ireo ravaky ny ririnina.
Fa ny iray amin'ireo drafitra hiarahan'ny ankizy any Madrid izay kilasika amin'ny Krismasy dia ny Three Kings Parade ny tolakandron'ny 5 Janoary. Amin'ny float mahatalanjona feno loko sy hazavana, ireo olon-kendry telo dia mizara vatomamy sy forona ho an'ny besinimaro nanatrika hatramin'ny niandohany tao amin'ny gara Nuevos Ministerios ka hatrany amin'ny Plaza de Cibeles izay hiafarany.
Eo anelanelan'ny biby
Ny ankizy rehetra dia tia biby ka ny fitsidihana an'i Faunia na ny Zoo Madrid miaraka aminy dia hevitra tsara. Faunia dia valan-javaboary natokana ho an'ny natiora izay mizara ekolozistia dimy ambin'ny folo tsy mitovy amin'ny zoo monisipaly. Na izany aza, tsy manana biby betsaka noho ity ity. Na izany na tsy izany, samy manao fivoriana sy seho miaraka amin'ny biby ireo toerana roa ireo raha ny fahitana azy ara-panabeazana izay manampy ny tanora sy ny antitra hahatakatra tsara ny toetrany sy ny fonenany voajanahary.
Ny fidirana ao Faunia dia misy vidiny 26,45 euro ho an'ny olon-dehibe sy ankizy latsaky ny 7 taona ary 19,95 euro ny karaman'ireo efa misotro ronono. Ao amin'ny zoo, ny tapakila ao amin'ny biraon'ny boaty dia mitentina 23,30 euro ho an'ny olon-dehibe raha 18,90 euro kosa ny mpisotro ronono sy ny ankizy Raha vidiana an-tserasera izy ireo dia mora kokoa ny vidiny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Ocio » Drafitra miaraka amin'ny ankizy any Madrid
Inona no jerena ao amin'ny Basque Country